Otu esi egbochi mkpọsa ntuli aka ka ọ rute na igbe akwụkwọ ozi gị | Akụkọ akụrụngwa
Miguel Hernandez | | General, Nkuzi
Ntuli aka nke afọ a 2019 na-eru nso na Spain, mgbanwe nke Iwu Ntuli Aka n'oge 2018 nyeere usoro nke na-enye ụmụ amaala aka na National Institute of Statistics iji nweta data ha ma gosipụta nkwụsị nke izipu mgbasa ozi ntuli aka. Site na mgbasa ozi ntuli aka anyị na-ezo aka na akwụkwọ ozi ndị otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-ezigara ndị na-edebanye aha ha n'akwụkwọ na atụmatụ ha na akwụkwọ ntuli aka. Anyị na-akuziri gị otu esi wepu aha gị ka ị ghara izipu mgbasa ozi ntuli aka n'aka ndị otu maka ntuli aka ndị a niile. Ngwa ngwa ngwa ị nwere ike izere ị consumptionụbiga akwụkwọ na plastik, oke nchekwa maka mbara ala na ime ihe megide mgbanwe ihu igwe.
1 Kedu ihe bụ mgbasa ozi ntuli aka?
2 Iwu ọ kwadoro ka ha zitere m mgbasa ozi ntuli aka na-enweghị ịrịọ ya?
3 Ihe ikwesiri igbochi mgbasa ozi ntuli aka
4 Etu esi wepu aha na usoro mgbasa ozi ntuli aka
5 Yɛmfa asɛm yi nyɛ nhwɛso
Kedu ihe bụ mgbasa ozi ntuli aka?
Ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị na-ebido mkpọsa ịtụ vootu ọnwa ole na ole tupu ntuli aka, agbanyeghị, ọ bụ rue ụbọchị ole na ole tupu ntuli aka gọọmentị ka ha na-amalite iziga "mgbasa ozi ntuli aka" n'ụlọ ndị debanyere aha ha.. Ndị iwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-ekwu na ikike ịnweta National Institute of Statistics, onye na-ahụ maka ịdenye aha ụmụ amaala niile na ịchọpụta, n’etiti ihe ndị ọzọ, ebe obibi ha. Ya mere, a na-ezigara mgbasa ozi ntuli aka a na adreesị nke dị na INE.
Ozugbo onye debanyere aha ya ruru ogo nke ntorobịa wee nwee ikike ịtụ vootu, na Ozugbo ewepụtara ọnụọgụ ntuli aka nke na-egosi onye nwere ike ịtụ vootu na ebe ha kwesịrị ịtụ vootu, akwụkwọ ozi mkpọsa ntuli aka bidoro ịbata. Ozi nzipu ozi a adịghị iche na ozi ọhaneze ọ bụla, ewezuga na ndị otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị nwere ike ịnweta data anyị na-enweghị mkpa ka anyị nye nkwenye anyị. Ọ na-achọ ịmata ihe, n'ihi na nke a na-emegide Iwu Nchedo Data ugbu a, agbanyeghị, ọ bụ mgbanwe na ụfọdụ ụmụ amaala bụ uru, n'ihi eziokwu ahụ na ha nwere ike ịme ntuli aka site n'ụlọ.
Iwu ọ kwadoro ka ha zitere m mgbasa ozi ntuli aka na-enweghị ịrịọ ya?
Ihe dị iche iche nke mgbasa ozi ntuli aka bụ na ọ na-abịakwute anyị n'agbanyeghị agbanyeghị echiche ndọrọ ndọrọ ọchịchị anyị, ya bụ, anyị na-enweta na broshuọ akwụkwọ ozi anyị site n'aka ọtụtụ ndị otu na-eguzo na ntuli aka, n'agbanyeghị agbanyeghị ndọrọ ndọrọ ọchịchị anyị ma ọ bụ nke ha. O sina dị, Na nzaghachi maka mkpesa nke òtù ụfọdụ, na 2018 a gbanwere ntọala ndị dị mkpa iji nwee ike izere ụdị mkpọsa ntuli aka a, Ikpuchido onwe gi na ikike inweta na imezi data anyi.
Bụrụ na ọ nwere ike, a na-ekwe ka mgbasa ozi ntuli aka site na ozi nzipu ugbu a na enweghị nkwenye nkwenye n'aka nwa amaala ahụ, ya bụ, ndị ndọrọndọrọ ọchịchị enweghị ike iji ụzọ dijitalụ dị ka SMS na email iji rụọ ọrụ mkpọsa ntuli aka., enyela nkwenye ya n'ụzọ doro anya na n'ụzọ doro anya, n'okpuru otu ọnọdụ dịka ụdị usoro nhazi data ọ bụla ọzọ. Na nkenke, mgbasa ozi ntuli aka nke nzi ozi bụ naanị nke chọrọ igbochi nwa amaala.
Ihe ikwesiri igbochi mgbasa ozi ntuli aka
Ihe mbụ anyị kwesịrị ijide n'aka bụ na anyị nwere ngwaọrụ ndị dị mkpa iji wepu aha na usoro mgbasa ozi ntuli aka site na ozi nzi ozi na National Institute of Statistics. Ọ bụ ihe dị mkpa iji rụọ ọrụ a site na Officelọ Ọrụ Electronic nke ahụ a, n'ihi nke a, anyị ga-achọ opekata mpe otu n'ime ngwaọrụ nyocha abụọ a
Asambodo Digital ma ọ bụ DNIe
Ozugbo anyị ejiri n'aka na anyị nwere ike nyochaa otu n'ime ngwaọrụ ndị a ma ama, anyị ga-ahụ na anyị ji ngwaọrụ kọmputa dị mkpa rụọ ọrụ ahụ. Asambodo ndị a dakọtara na ọtụtụ sistemụ arụmọrụ, ọ bụ ezie na nhazi akwadoro bụ iji kọmputa na Windows 7 n'ihu na ihe nchọgharị weebụ nke Internet Explorer. Wayzọ a anyị ji n'aka na anyị nwere ndakọrịta kachasị, agbanyeghị, anyị enweela ike ịchọpụta na ọ na-arụ ọrụ nke ọma na macOS yana site na Mozilla Firefox na Google Chrome dị ka ihe nchọgharị ndị ọzọ. Ugbu a na anyị achọpụtala na anyị nwere ihe ọ ga - ewe iji nwee ike ịrụ ọrụ nke iwepu aha na usoro mgbasa ozi ntuli aka, anyị ga - eme usoro ndị a.
Etu esi wepu aha na usoro mgbasa ozi ntuli aka
Soro usoro dị mfe n'okpuru m hapụrụ gị mgbe ahụ:
Anyị banyere websaịtị nke National Institute of Statistics (Jikọọ)
Ozugbo n'ime, n'elu anyị na-ahọrọ menu "Ọnụ ọgụgụ ntuli aka"
Ugbu a pịa na "Nyocha banyere data ndebanye aha na ntuli aka ndị ntuli aka"
Nchịkọta Nhọrọ Ndị Ntuli Aka ga-emeghe, n'elu anyị hapụ òké Usoro> Usoro Census> Mwepu na mbipụta maka okwu nduhie
Mgbe anyị pịrị na nhọrọ a, menu kwekọrọ ga-emepe ka anyị wee nwee ike ịmalite otu nnọkọ site na nyocha pụtara na anyị akọwapụtara na mbụ (DNIe - Akwụkwọ Asambodo - Cl @ ve). Ọ bụ ugbu a mgbe a ga-emepe otu akwụkwọ ngwa ahụ naanị na anyị ga-pịa bọtịnụ ala nke na-egosi akara «Zipu ngwa». Site ugbu a gawa, National Institute of Statistics ga-ede ọjụjụ anyị ịhapụ data ọgụgụ anyị nke Ntuli Aka ka ọ bụrụ akụkụ nke akwụkwọ ezigara ndị otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị maka ebumnuche iziga anyị akwụkwọ ozi mgbasa ozi ndọrọ ndọrọ ọchịchị. N’ụzọ dị mfe a anyị ga - egbochi mfe ụdị mkpọsa ntuli aka ọ bụla ịbata n’ụlọ anyị.
Yɛmfa asɛm yi nyɛ nhwɛso
Ihe karịrị votu mgbasa ozi 370 ka ezigara ụmụ amaala yana ihe dị ka nde envelopu 60 dị na ntuli aka ntuli aka. Mpempe akwụkwọ ndị a ejiri plastik na ihe mpempe akwụkwọ enweghị isi na oge nke nkwukọrịta na ụwa dijitalụ, ịjụ mgbasa ozi ntuli aka bụ ụzọ dị egwu iji zere mmetọ, na enwere ọtụtụ ihe onwunwe dị mkpa mgbe ọtụtụ n'ime votu ndị ahụ anaghị eweta ezigbo mmasị na ha na-ejedebe na ihe eji eme ihe, nke kachasị mma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Nkuzi » Otu esi egbochi mkpọsa ntuli aka ka ọ rute na igbe ozi gị
Ihe ọhụrụ Sonos One SL, ọkà okwu na-enweghị igwe okwu, dị ugbu a maka euro 199
Huawei Mate 30 na Mate 30 Pro: A na-emegharị ọhụụ dị elu